हृदयघातबाट बच्न कस्ताे खाना नखाने ?
अनियमित खानपानका कारण तपाईलाई धेरै किसिमका रोगहरु लाग्न सक्छन् । समयमा खाना नखानु, धेरै खाना खानु जस्ता अनियमित खानपानका कारण शरीरमा नराम्रो असर परिरहेको हुन्छ । निम्नानुसार खाना खाने बानी छ भने तप...
स्वस्थ रहन पेटभित्रका जिवाणुलाई खुसी पार्नुस्
शरीरलाई स्वस्थ राख्न खानेकुराको मात्र घटाउनुको सट्टा खानामा विविधता बढाउनु अधिक उपयुक्त हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। विविधतायुक्त खानाले शरीरमा हुने जिवाणुको व्यवहारमा पनि विविधता ल्याउने भएकाले त्य...
किन दिनको तीन पटक हामीलाई खाना चाहिन्छ ?
हाम्रो शरीरलाई उर्जा दिनको लागि खाना चाहिन्छ । खाना बिना हाम्रो शरीरले राम्ररी काम गर्न सक्दैन । त्यसैले जसले यो समस्याबारे पढेका छन् उनीहरुले हामीलाई स“धै दिनको सुरुवात राम्रो नास्ताबाट गर्ने सल्...